Qalbi-dhagax oo weerar ku qaaday madaxweyne Farmaajo bixiyeyna xog ku saabsan xariggiisii.
November 21, 2020 Xuseen 14
PUNTLANDTIMES (MUQDISHO)-Cabdikariin Sheekh Muuse (Qalbi-dhagax) oo siweyn looga yaqaan dhulka Soomaalida ayaa ka hadlay cidii ka dambeeysay dhiibistiisii Itoobiya iyo xarig loo geystay oo uu in muddo xirnaa xabsi ku yaalla Magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, kadib markii laga qabtay Soomaaliya.
Sarkaalkaan katirsanaa ONLF ee loo dhiibey Itoobiya ayaa waxa uu sheegay inay fiicnaan laheyd Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Kheyre wixii uu ku leeyahay iyo qeybtii uu ku lahaa dhiibdidiisa inuu u sheego shacabka Soomaaliyeed.
Cabdikariim Sheekh Muuse (Qalbi-dhagax) oo ahaa sarkaal ka tirsan ONLF oo bishii Agoosto ee sanadkii 2017-kii dowladda Federaalka Soomaaliya u gacan galisay Itoobiya, isagoo in muddo xirnaa, waxaana dhiibistiisu ay hadal hayn badan ka dhex abuurtay bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda federalka ah ee dalka.
Dhiibista Qalbidhagx masuuliyaddeeda yaa iskale cidda isweydiineyso waa doqomo ama dad kas isku aqli tiraayo.
Dilka Somalia waxuu leeyahay dowlad, dowladdana waxey leedahay hogaamiye oo ah Madaxeeyne.
Marka waxii wanaag ah iyo waxii xumaata ah waxaa masuuliyaddeeda iska leh Madaxweynaha.
Farmajo kuwa u cudurdaaraayo dadka ma doqomo mey u haystaan?
Farmaajo waxuu sameeyay wax dhiibistii Qalbidhagax ka daran.
1) Ciidan Ethiopian ah in Somalia dhexdeeda dad Soomaaliyeed ku Baydhabo)
2) Musharrax Madaxweynimo oo doorasho ku jiro in Ciidan Ethipian ah ku dalbaday in last soo xiro
3) In Ciidan Ethiopian ah adeegsaday in Kismaayo weeraran airportka qabsadaan ka dibna Madaxweynaha Jubbaland soo Xiraan
Anigu dhiibista Qalbidhagax waxaa igala weyn adeegsiga uu Farmaajo adeegsanaayo ciidamo Ethiopian ah Somaliya dhexdeeda kuna argagixinaayo ummaddi u dhiibatay jagada masuuliyadda Madaxweyninamada.
Arintaan dhiibistii Qalbi Dhagax waa ka duwan tahay siday dadka qaar u sawiraan maxaa yeeley Farmaajo iyo Kheyre kumay dhaci kareen inay Itoobiya ka diidaan amarkaas. Itoobiya taageero culus yay ka haysataa America iyo yurubta oo culeys xoogan DFS ku saaray inay ninkaan Itoobiya shardi la’aan u dhiibaan. Maahayn amar DFS hadal ka keeni kadho.
Dad Waxaa jira arintaan dacaayad uga fidinaaya Farmaajo iyo Kheyre ayakoo ujeedkooda yahay inay suuqa ka saaraan oo DFS la noco. Waxaa kaloo jira dad arintaan u isticmaali raba inay Daaroodka colaad ka dhax abuuraan saan meelo badan ka arkay. DFS ma dhici kadho inay diido amar America iyo yurub Itoobiya ku tageerayaan marka beenta iyo isku dirka hala dhaafo.
America hadey rabtey qalbi dhagax siduu kenya ku joogey>
Arrinkaan waa in laga dhiijiyaa oo aan sidaa looga harin!!
Arrinkani shakhsi waa ka guda ballaaran yahay; sidaa la ajligeed, maaha in lagu kaliyeeyo Cabdi-kariin Muuse. Waxa uu kiiskani la mid yahay iyada oo ummaddii Soomaaliyeed oo dhan loo gacan geliyey CADAW soo jireen ah, oo wax innaba CUDUR DAAR ah malaha.
Waxaa kale oo xaqiiq ah in waddanka uu madaxweyne ka yahay Farmaajo, oo eedda koowaadna ay isaga ku dhacayso, laakiin hadda waddo ayuu Khayre isku furay. Annaga oo wada og in waddanka uu madaxweyne ka yahay Farmaajo, buu ra’iisal wasaarihiisii Khayre RAALLIGELIN ka bixiyey dhacdo ay xukuumaddii uu wasiirka koowaad ka ahaa geysatay. Sidaa si lamid ah, sida uu sheegay dhibane cabdi-kariin, waa in Khayre si gole ah uu ummadda ugu sheegaa qaybtii uu ku lahaa jariimadaa iyo KHAA’INUL WADDANINIMADAA dhacday.
Intaa waxaa dheer, sida la wada xasuusto, madaxweyne Farmaajo waxa uu taageeray go’aankii baarlamaanka ee ma taageerin go’aankii xukuumadda. Waxaa kale oo la wada xasuustaa waraysigii uu bixiyey guddoomiyaha aqalka sare, Cabdi Xaashi, uu ku yiri aniga oo la jooga baa madaxweynuhu SANBALOOSHE u yeeray si uu kiiska wax uga weydiiyo. Sanbalooshena waxa uu soo saaray baasaboor uu caddayn uga dhigayo in ninkani uu isagu is dhiibayo ee aan cidina dhiibayn. Halkaas, marka, waxaa laga fahmi karaa in Farmaajo uusan kiiska horraantiisii la socon oo aysan isaga ka bilaaban.
Waxa kale oo aad xasuusataan in su’aal ku saabsanayd kiiskan oo Khayre la weydiiyey uu Sanbalooshe ka hor istaagay in uu ka jawaabo!! Maxaa sababay ee ninkan Gaalkacyo looga soo celiyey ee godobta Xamar iyo Villa Somalia loola soo doontay?! Maa Gaalkacyo laga dhiibo illeen awalba goboladu way dhiibi jireene?
Marka aad intaas oo dhan eegto, waxa aan qabaa in arribkan lagu SHIRQOOLAYEY Farmaajo, isaguna wuu iska garan waayey oo nin JILICSAN buu noqday. Sida aan qabo, hadduu Farmaajo arrinkan bud dhige u ahaa, waxa uu orean lahaa hallaga dhiibo Gaalkacyo oo yaan Xamar laygu keenin. Nin sumcad xumi iyo godob sokeeye soo dhowaysanayaa majiro ee arrinku dabin Farmaajo loo dhigay buu ahaa isaguna waa ku dhacay sida aan qabo.
Si kastaba, ma ihi nin difaacaya Farmaajo, laakiin waa arrin iga daadagi waayey sida uu ku bilawday iyo sida uu ku dhammaaday. Waxaa marka habboon in Khayre, oo hadda sanduuq isku furay, uu arrinkan si gole ah ugaga hadlo. Yaa filimkan ATOOREW ka ahaa?
Gunaanadkii, Qalbi dhagax iyo ONLF waxa aan oran lahaa yuusan Farmaajo idiin muuqane arrinkan aad ugu kuur gala. Waxaadna ogaataan in Farmaajo uu awood xad dhaaf ah siiyey Khayre, oo taa ka faa’iidaystay si uu dabino ugu dhigo ninkii wasiirka koowaad ka dhigay illeen waa nin musharraxnimo u qarsoonayde.
Anagaa cajabnay. Farmaajo haduu bixiyay Qalbi dhagax, Dee magacna ka AH Dhagax. Warlords kii Xamar joogi jidhay oo qaarkood dhinteen, waxay beec geeyeen kumaan Somali ah. Maamuladii Puntland soo amray sidoo kale, Somaliland ayana kumaan iib geeyeen. Ku dar Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ayana dad badan gateen. Marka hadii Farmaajo iib geeyay Dhagax, wuuba yadheeyay. Bal eega Klin ka, oo Qalbi dhagax kamid yahay imisay dileen, iib na geeyeen? Waa iska nus Malyan. Qalbi Dhagaxoow, Ina adeeroow naga daa Ilinta Yixaas ka.
Horta hore farmajo ma aha federaalka oo cid federalka dartis u nacaysa majidho mana jiri doonto.
Tan kale dowlad si qarsoodi ah ugu Khasbi kadha dowlad kale waxaysan Rabin ma jidho.
Wax Kasta oo qarsooodi ah waa wax sharci daro ah.
Qorshayaasha qarsoodiga ah waa kuwa lagu Dan Gaaro.
Waa… let’s make a deal.
“Saas ii samee ana saan baan kuu sameyn”.
“Qalbi Dhagax iisoo gacan gali ana xukumadaada ayaan cimri deer u yeelin oo taageero buuxda siin”.
Markii qalbi dhagax la dhiibay ethiopia way kasoo baxday balantii ay farmajo u balan qaaday. Shicibkii baydhabo ayey u xasuuqday. Wadaadkii ayey u qabatay oo u Gagan gelisey. Jubaland bay isku dayday in ay u qabato, iyo shaqooyin badan oo miiska hoostiisa ethiopia u qabatay farmaajo.
Dhibaatadu ma aha farmaajo ee waxuu dibku salka ku hayaa umulaha somaaliyeed. Dhow beri ayey umulaha somaaliyeed qayliyaan oo maalmo kadib waxay Jantaan in uu gusku mar labaad galo.
Waxay hada wararku sheegayaan in cidamada bad ee ethiopia la kaamilay oo hawlgal diyaar u yihiin oo bada somaaliyeed so dagayaan ayagoo leh “ama fad ama ha fadin”.
Saciixa farmaajo ayey hayataan. MadaaMa aanu nahay umulo dowr beri ayaanu qaylin kadibna wax kastana waxay noo noqon ‘THE NEW NORMAL”
Waxa aan ku dari lahaa, oo ay dad badani ogyihiin, Cabdi-kariin Muuse waxa uu taageere u yahay qaar ka mid ah murashixiinta xilka madaxweyne! Kiiskiiba waxa uu u isticmaalayaa OLOLE doorasho
Maxaa loo yiri somali lama taba-bari karo.
Ajaanibku awal aqoon bay noo LaHayn. Hada’se waa na barteen.
Waxay ogaadeen in si dadban oo kafool-kafool ahayn naloo taba bari karo.
“Tan ku day … hadana taas ku day, oo tii gasha eeg”
Kkkkk ma anaa Moogan mise waa dhexe waxaa la shaaciyey in qalbi dhagax geeriyooday, oo Itobiya ku geeriyooday??????? CAJIIB
Arrinta Qalbi Dhagax inkasta oo uu Gabre mar uu ka hadlay sheegay in aay uga mahad celinayaan oo kali ah, hay’adda Nabad Sugidda Soomaaliya oo uu haaystey Sanbaloolshe, Haddana eeddeedu Aakhira iyo adduunma Farmaajo ayaay Madaxa u saarantay oo isaga ayaa Dalka Madaxweyne ka ahaa:
Kkkk War caadifadda iska daaya.Waraysigii Cabdi Xaashi ayuu ku dhan yahay arrinta Qalbidhagax.Qofkii lehba waa danbiile qaladbay ila tahay.
Isweydiiya maxaa ka dhigay arrinta in la buunbuuniyo?
1-Imisaa ayaa horey loo dhiibay?
2-Imisaa ayuu isagu Qalbidhagax dilay?
FG:Maamulka kastaa ankee kan dictatorship ah,masuul kastaa waa in uu ilaaliya danta qaranka.
Isweydii maxaa loola soo doortay Muqdisho?Maxaa last minute loogu keenay?
Sidoo kale isweydii masbuux hotel lama dejiyo,waxaa cajiib ah waraysiga wuxuu ku leeyahay sirdoonka Ethiopia ayaa ii imaanayay kkkk waliba hotel ayuu degan yahay.
HALKAA WAXAA IIGA BAXAY.
1-Sheekadu in ay ahayd in mid la dhoodhoobay.
2-In uu ahaaba jaajuus u badi.
Sidoo kale si wuxuu u hadlayaa in chip lasoo galiyay Dani iyo Axmed madoobe ayaa ka dhex qaylinaya.Markii horeba wuxuu ahaa jabhad aan la aqoon.
Si Somalinimo ah aan u diido dulmi nooc kastaa uu yahay.
BALSE WARARKA QAAR LAMA QAADAN KARO.
Arintan Qalbi Dhagax, waxa ku suntan intii kasoo qeyb qaadatay oo dhan oo uu Farmaajo kow ka yahay, Kheyre labo ka yahay, Sanbaloolshe sadex ka yahay, iyo intii kale ee wax ogeyd oo dhan. Farmaajo ayayse ugu daran tahay oo isagaa qaadaya masuuliyada ugu badan.
Dadka halkan excuseka uga sameynayana waxaan leeyahay ha is wareerinina.
Farmaajo waxaa khasbey Ethiopia iyo Dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska. Waa huuhaa. Muwaadin Soomaaliyeed dhiiba sinaba Dawladi uma aqbasho. Intwy qairyaan ayay odhan karayeen, anagu ninkaas ma soo heli kareyno. Ama waar dhuumo ama baxso ayay odhan karayeen. Dawladahaasna wey warwareejin karayeen wax badan.
Waxey kaloo hoos u shaacin lahaayeen sirtaas oo dadweynaha ayay soo dhexgelin kari lahaayeen si ay u mucaaridaan oo banaabaxaan. Taasna waxey siin kari laheyd daw ay toos ‘maya anagu anagu muwaadin Soomaaliyeed idiin dhiibi meyno’ ugu yidhaahdaan.
Farmaajo ma ogeyn. Kkkk Hadaanu ogeyn waxa uu eryi lahaa intii ka qeyb qaadatay arintaas oo dhan. Sharcigana wuu hor keeni lahaa. Sumcad aanu heysan ayuu ku kasban lahaa. Waxa uu noqon lahaa maraankii halka shey ee wacnaa gartey. Madaxda dunidu wax yar oo basiid ah ayay isku casilaan.
Inta kaleeto ee isaga ka hooseysana waxa u banaaneyd in ay intey amarka diidaan is casilaan, cod dheerna shacabka ugu sheegaan falkaas xun ee Dawladu damacsan tahay. Dadka ayaa kici lahaa oo arinta wey kashifin karayeen.
Farmaajo’s bigest and most known legacy will be Qalbi Dhagax. No doubt about it. That apart from becaming Abiy Ahmed’s puppy.
FARMAAJO WASIIR CAWAD WUXUU KU ERYEY WARAAQ YAR OO UU LEEYAHAY, DAGAALKA ITOOBIYA HALAGU DHAMMEEYO WADA-HADAL, HADDII FARMAAJO AANNU OGAYN DHIIBINTA QALBI-DHAGAX, MUXUU U CAYRIN WAAYEY CIDDII KA DAMBEYSAY, MUXUU UGU SAARI WAAYEY GUDDI MADAX BANAAN OO SOO BAARTA, MUXUU UMMADDA SOOMAALIYEED UGALA HADLI WAAYEY, MUXUU RALLI GELIN UGA BIXIN WAAYEY? KUWA DIFAACAYA ILLAAHAY IDIINKAGA TAGI MAAYO.
FARMAAJO ITOOBIAY DEKEDO AYUU KU WAREEJIYEY
WUXUU UBAX DHIGAY TAALLADA DANJJIRKA DAHSOON EE CIIDAMADII ITOOBIYA OO U SUJUUDAY
WUXUU KISMANYO ISKU DAYEY INUU ITOOBIYAAN KU WEERARO
BAYDHABO AYUU KU WEERARAY OO DAD KU LAAYEY
INA CABDI SHAKUUR OO MAXKAMAD WAARAN U JARTA KU FILAYD BUU WEERARAY
ABIYA AYUU U ISTICMAALAY INUU SOMALILAND GEEYO , OO XAMBAAR KU GEEYO
WUXUU CAYRIYEY JAWAARI SI SHARCI DARRO AH
7 DAQIIQO AYUU KU RIDAY PM KHEYRE OO AAN XATAA LAGA DOODIN
GUDDIYO DOORASHO OO SHAQAALIHIISII IYO GUULWADAYAAL IYO NABADSUGID BUU SAMEEYEY
KUWA DIFAACAYA, ALLAHA WEYN QALBIGIINA HA MADOOBEEYO, OO MAANKA HA IDIINKA QAADO